Apple wuxuu bilaabay daraasad lagu ogaanayo COVID-19 Apple Watch | Wararka IPhone
Apple ayaa bilawday daraasad lagu ogaanayo COVID-19 iyada oo lala socdo Apple Watch
Waxaan la dhibtoonaynay cudurka faafa ee COVID-119 in kabadan hal sano waxayna umuuqataa inaysan waligood dhamaanaynin ... Dhibaatooyinka talaalada, dhibaatooyinka siyaasadaha xakamaynta, wararka aan dhamaadka lahayn ee aan nasiino siinin wajiga masiibadan aad ayey noogu adag tahay saameynta Laakiin marka la eego war aad u xun, marwalba waxaan haysannaa rajo aan caadi ahayn. Maanta Apple ayaa hadda soo saartay daraasad cusub oo ay u adeegsan doonto Apple Watch si ay goor hore u ogaato infekshanka suurtagalka ah ee COVID-19. Sii wad aqrinta in aan ku siineyno dhammaan faahfaahinta ku saabsan daraasaddan cusub ee ay Apple sameysay ee lagu ogaanayo COVID-19.
Sidaan kuu sheegayno, Apple waxay rabtay inay soo bandhigto daraasad cusub (Xiisaha ay shirkaddu u leedahay adeegsiga Apple Watch si ay u soo ogaato dhibaatooyinka caafimaad horay ayaa loo ogaa) taas ogaado cudurada neef mareenka, oo ay ku jiraan COVID-19 ama ifilada, daraasad laga fulinayo Mareykanka iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Washington iyo Daraasadda Hargabka ee Seattle, taasina waxay socon doontaa lix bilood. Iyada oo loo marayo Jaamacadaha iyo codsiga Apple Research, wicitaanka waxaa loo bilaabi doonaa dadka isticmaala si ay u codsadaan. Hadday yihiin la xushay waxaa la siin doonaa Apple Watch kaas oo ururin doona xogta caafimaadkooda iyo waxqabadkooda. Waxay sidoo kale ku qasbanaan doonaan inay dhammaystiraan sahaminta (toddobaadle iyo bille) iyada oo loo marayo Apple Research oo ku saabsan iPhone-kooda oo ku saabsan calaamadaha neefsashada iyo qaab nololeedkooda.
Haddii isticmaaluhu uu ku dhaco cudurka inta lagu jiro daraasadda, baaritaan PCR oo lacag la'aan ah ayaa la bixin doonaa. si loo barbardhigo xogta laga soo saaray Apple Watch. Taasina waa in dareemayaasha ugu dambeeyay ee Apple Watch ay wax badan nooga sheegi karaan sida aan nahay. A Daraasadda Mount Sinai waxay ogaatay in Apple Watch uu awood u leeyahay saadaalinta cudurka wanaagsan ee COVID-19 illaa toddobaad ka hor baaritaanka PCR. Adigana, Miyaad ka qayb geli lahayd imtixaan la mid ah Yurub?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple ayaa bilawday daraasad lagu ogaanayo COVID-19 iyada oo lala socdo Apple Watch
Podcast 12x26: Wax kasta oo aan ka ognahay dhacdada xigta ee 20-ka
Dhamaan wararka ku saabsan macruufka 14.5 ee fiidiyowga ah